» Daawo Muqaalka:Soomaalida ku Nool Gobolka Manisoora oo soo waa jahday Cabsi xoogan akdib markii ay ……
Daawo muuqaalka:Aamina Muuse Weheliye Oo Barnaamijkii Nalafiidso Ka bilowday Tv-ga……
Daawo muuqaalka:Madaxwaynihii hore ee Khatumo & Mas’uuliyiin shir ku qabtay Muqdisho Kana……
Dhageeyso maqalka:Taliyihii & Ku xigeenkii S/Land Ee Qorilugud oo la diley, Ninka diley Iyo……
Qaar kamid ah Hoteelada Waa weyn ee Muqdisho oo xirmay & kuwa kale oo iyana qarka u saaran in dhawaan ay xirmaan….
ururka Alshabaab oo sameeyay Arrin murugo galisay Militeriga DF(ogow sabta maxay tahay)….
Daawo Muqaalka:Soomaalida ku Nool Gobolka Manisoora oo soo waa jahday Cabsi xoogan akdib markii ay ……
Sep 4, 2014 - jawaab	Soomaalida deggan gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka ayaa argagax ka qaaday wararka sheegaya in nin Soomaali-Marayka ah uu ku dhintay dalka Syria isagoo ka bar-bar dagaallamaya kooxda Daacish. Ninkaas ayaa noqday qofkii labaad ee Maraykan ah ee ku dhintay Syria.
Sidoo kale Douglas McCain oo ah Maraykan ka so jeeda Minnesota, ayaa isna ku dhintay Syria, iyadoo tani ay abuurtay wel-wel ku aaddan xagjirnimada iyo dhalinyarada loo qoranayo dagaallada argagixsada.
Weriyaha VOA Kane Farabaugh ayaa warbixintan ka soo diray Minnesota, Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo jeedinaysa.
« Warbixinta Ka HoreysayDaawo Muqaalka: Coll Barre Hiiraale oo shir jaraaid ku qabtay magalada mugdisho maxaa ka soo baxay Tolow shirka…	Warbixinta Xigto »Daawo Muqaalka:Hogaamiyaha ugu weyn ee Al-Qaacda oo soo Diray Cajalad cusub muxuu Yiri ayman…..	Leave a Reply Cancel reply